Ghanaian — Emmanuel Church
Yema wo akwaaba ba Emmanuel
Asor. Y3y3 Kristian Asor a yebo hyew wo Sunsum Kronkron mu na y3gye Kyer3w Kronkron no nyinara dzi. Yedzi ehyia wo Durham onye Chester le Street nkurow mu. Y3y3 ebusuakuw kor na yerinyin daa nyinara wo ahokeka Kronkron mu dze ako wiadze mfrandze anan nyinara.
Hen akondo nye de, yebodor wo dodow mu na asormba so benyin wo Sunsum mu. Asor yi ye ebusuakuw kor na yebuei hen abow ato ho ama obiara obeba no y3y3 no awaawaa etuu ba ebusua yi mu. Nyame adom aky3dze horow a odze adom N'asor na y3dze risi Asor yi. Yenam Kwan ahorow mu Kyer3 h3n enyigye. Asor Yi ne tsir wo Durham na hen enyi da Kwan de yebetra ako amanaman ahorow a mprenpren India na South Africa ka ho.
Kwesida anapa dondu mpaamu biara yedzi ehyia. Dapenda mu so yeakyeky3 h3n mu ekuwekuw nkakramba a yehyia efiefie mu.
Regions Beyond nkabom nsor no yeka ho. Hen asormba fifi amanhorow do. Yetu nsempakafo MA woko amanadze de asomafo. Hen enyi begye pii de Kwesida enye hen beba abobomu asom ber a oabo dondu mpaamu anapa biara.